မူကြိုမှာရည်းစားစာရခဲ့တဲ့ ဆောင်အီဂွတ်ရဲ့သားလေး – Entertainment – International Celebrity – Duwun
Su 2016-12-17 07:47:38.0, 2016-12-17 07:47:38.0
မင်းသား ဆောင်အီဂွတ်လိုပဲ အမြွှာသားလေးသုံးယောက်လုံးက ချစ်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေမှာလည်း ပါဝင်ထားတဲ့ ကလေးတွေဆိုတော့ လူချစ်လူခင်လည်း များပါတယ်။ မန်ဆယ် ဆိုရင် ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ကျောင်းမှာ ရည်းစားစာတောင် ပေးခံရတယ်လို့ ဆောင်အီဂွတ်က အင်စတာဂရမ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
#emo#7Jik###emo#64qY##! #emo#7Jyg###emo#7LmY###emo#7JuQ###emo#7JeQ###emo#7ISc## #emo#7Jew###emo#7JWg###emo#7Y64###emo#7KeA##(?) #emo#67Cb###emo#7JWE###emo#7Jio## #emo#66eI###emo#7ISx###emo#7J2Y## #emo#66eM###emo#7IS4##~^^; #songmanseh
A post shared by 1958 (@songilkook) on Dec 15, 2016 at 6:29am PST
" အစ်ကို ဆောင်မန်ဆယ်.. အတူတူ ကစားရအောင်လေ။ ကျွန်မ အစ်ကိုကို့ကို သဘောကျတယ်" ဆိုတဲ့ စာလေးကိုကိုင်ရင်း ချစ်စဖွယ်ဟန်အမူအရာလုပ်နေတဲ့ မန်ဆယ်ရဲ့ပုံကို အီဂွတ်က အင်စတာဂရမ်မှာ တင်ထားတာပါ။ အမြွှာလေးသုံးယောက်က ခုဆို သူငယ်တန်း စတင်တက်ရောက်နေပါပြီ။
Source : Song Il Kook Instagram